चिनियाँ विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण, के के छन् एजेण्डा ? – Karnalikhabar
चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी आउँदो शुक्रबार नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार वाङको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय चिनियाँ टोली शुक्रबार भ्रमणमा आउन लागेको हो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि आउन लागेका वाङ पहिलो उच्चस्तरीय पाहुना हुन् ।
एक वर्षअघि चिनियाँ रक्षामन्त्री वेई तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको संघारमा आइपुगेका थिए भने एमसिसी पारित भएको अवस्थामा वाङ आइपुग्दै छन् । नेपालमा अमेरिकी सहायता परियोजना मिलिनियम च्यालेन्स कपरिसन (एमसीसी) संसदबाट पारित भएपछि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ नेपाल भ्रमणमा आउने तयारीमा लाग्नलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका वाङले नेपाली समकक्षी डा. नारायण खड्कासँग द्विपक्षीय औपचारिक वार्ता गर्नेछन् भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट हुनेछ। यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
अघिल्लो - देशका यी स्थानहरुमा चट्याङ्सहित वर्षा
किभको सपिङ मलमा क्षेप्यास्त्र प्रहार, ८ जनाको मृत्यु - पछिल्लो